I-Google Analytics Spam - Uchwepheshe we-Semalt Uyazi ukuthi ungakuvimbela kanjani
i-Google Analytics ithinteka ngezinhlobo ezahlukene zogaxekile. Ugaxekile ovame kakhulu ochaphazela i-Google Analytics yi-spam yokudluliselwa. I-spam ihlose ama-akhawunti ahlukahlukene we-Google ngezikhathi ezithile kodwa ingahle ihlolwe kuma-akhawunti athile.
uFrank Abagnale, iMenenja yeMpumelelo YokuPhepha kwamakhasimende Semalt , ubheka izindlela zokuchoboza ugaxekile lwe-Google Analytics.
Ukupaka kudalwe ngezizathu eziningi:
a) Ukuthengwa kweKhomishini
Abadali bokugaxekile bavame ukuthola amakhomishana okuphumela ekukhuleni kwezibalo zomgwaqo ezikhiqizwa izigaxekile.
Abanye abadali bogaxekile basebenzisa lezi zigaxekile ukuze basakaze imibono yabo futhi basebenzise ukukhangisa ukuze bakwazi ukufinyelela kubabukeli abaningi.
c) Ukuqapha ama-imeyili
Lezi zigaxekile zisetshenziselwa ukuphazamisa ama-akhawunti we-imeyili athengiswa kwabanye abasebenzisi.
d) Ukusakazeka kwe-Malware
I-Malware ibhekisela ezinhlelweni ezinonya ezisetshenziselwa ukuthola ukufinyelela okungagunyaziwe kwedatha ye-elektroniki. Amaplayipi asetshenziselwa ukusakaza izinhlelo ezinjalo ezingaba ngamafayili noma iTrojan.
e) Ukusakaza ulwazi olukhohlisayo ngama-CEO ukwandisa ukuthengisa
Kube khona amacala ama-CEO asebenzisa izigaxekile ukudala umqondo wamanga wokuthi uphumelele ngokubeka lolu lwazi kumawebhusayithi abo.
Kunezindlela ezahlukene lapho izigaxe zokudluliselwa zingavinjelwa ukuthi:
1) Ukusetshenziswa kwamafayela angu - .htacess
Le ndlela ihilela ukukopisha amafayela athile kumakhompikhi athile, futhi lawa mafayela ayala ukuthi anqume ukuthi iseva isebenza kanjani. Le ndlela yokuvimba ukugaxeka kunemikhawulo ehlanganisa:
Ama-bots akhethekile futhi agwema amasayithi lapho avinjelwe khona yizifayili zamafayela.
Kunzima ukuqeda wonke amawebhusayithi (ama-URL) ngoba idla isikhathi esiningi.
Izigaxekile nazo zenziwa nsukuzonke, ngakho-ke kuba nzima ukuhambisana nabo.
2) Ukusetshenziswa kwezihlungi zenkambiso
Inqubo ingafingqwa kulezi zinyathelo ezilandelayo:
Chofoza ku-Google Analytics kwikhompyutheni yakho bese ukhetha isithonjana se-All Traffic esilandelwa inketho yokudlulisa.
Isinyathelo esilandelayo ukuqinisekisa ukuthi uhlele i-traffic yokudlulisela ngezinga elifanele lokunciphisa. Izinga lokunciphisa eliphakanyisiwe liyizinyanga ezimbalwa. Uhlu Lokudluliselwa Lokugcina lungasetshenziselwa ukunquma izinga lapho isizinda sithinteka yizigaxekile.
Kukhona izixhumanisi ezingasetshenziselwa ukuthola uhlu lokudlulisela phambili uma kunzima ukufinyeleleka ohlwini lokugcina lokudluliselwa. Lezi zixhumanisi zihlanganisa:
Isinyathelo esilandelayo ngokuchofoza isithonjana se-Admin bese ukhetha okukhethwa kukho ukuhlunga. Lokhu kulandelwa ngokukhetha inketho yokwengeza Engeza. Le nqubo ilandelwa ngokukhetha igama lesihlungi bese ukhetha inketho yangokwezifiso njengohlobo lokuhlunga. Lokhu kulandelwa ngokukhetha inkinobho yokukhipha bese ukhetha 'Umkhankaso Umthombo' enkampini yokuhlunga. Isinyathelo sokugcina sikhetha iphethini yokuhlunga.
Ukunciphisa ukusebenzisa lezi zindlela zokuvimbela u-spam ware wukuthi kungenzeka ukuvimbela idatha engahlosiwe kanye nezizinda eziyishumi kuphela zinganezelwa ngesikhathi esinikeziwe.
3) Ukusetshenziswa koHlelo Lokungabikho lokudluliselwa
Enye indlela yokuvimbela ukugaxeka usebenzisa uhlu lokudlulisela. Isetshenziswe kumuntu wesithathu kanye nokuzidlulisa. Ukusebenza kwezingcingo zokudluliselwa ngaphandle kungenziwa ngezinyathelo ezintathu.
Khetha ukhetho lomqondisi ku-akhawunti ye-Google Analytics bese ukhetha ikholomu yePropati. Lokhu kulandelwa ngokukhetha inketho yokuthola ulwazi.
Khetha Uhlu Lokukhishwa Lokudluliselwa Kokudlulisa bese uchofoza inkinobho ye-ADD Referral Exclusion.
Khetha izizinda ozifisa ukuzikhiphela emgwaqweni wokudluliselwa.
Ukunciphisa le ndlela yukuthi ukungezwa kwezizinda ngobuningi akusekelwa uhlelo.